> Resource> iTunes> Olee mbubata iTunes Library ka Winamp
Chọrọ ịgbanwee si iTunes ka Winamp na Android ekwentị na-enweghị adịkwa gị iTunes n'ọbá akwụkwọ? Ugbu a na ọhụrụ version nke Winamp, ị nwere ike mfe mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na listi ọkpụkpọ, na mmekọrịta na Android ekwentị na Winamp ngwa n'ihi na Android. Lee ihe zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru.
Winamp Ọhụrụ Installation
Nzọụkwụ 1: Download ọhụrụ version nke Winamp Media Player, na wụnye na nkeji. Rịba ama na Version 5.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị a chọrọ maka wireless mmekọrịta ka Winamp maka Android.
Nzọụkwụ 2: Gbaa Winamp na ị ga-kpaliri mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gaa Winamp. Họrọ "Import si iTunes" mbubata niile nke gị iTunes music tracks n'ime Winamp Media Library.
Ugbua arụnyere Winamp
Ọ bụrụ na ị na-ama arụnyere Winamp na gị usoro, i kwesịrị ime ya aka site na ịpị "Library" na ala n'aka ekpe akuku nke ọkpụkpọ na họrọ "Import iTunes Media Library".
Naanị iTunes n'ọbá akwụkwọ ezughị. Ị ga-achọ mbubata gị iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ, kwa. Iji mee otú ahụ, pịa "Library" na ala n'akụkụ aka ekpe ma họrọ "Import iTunes Playlist". Ya mere, ị ga-esi na ihe niile dị Winamp yiri iTunes, na-amalite na-anụ ụtọ ọsọ na ndị ọzọ na atụmatụ nke Winamp.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta gị Winamp media n'ọbá akwụkwọ gaa Winamp na gị ọbá akwụkwọ ngwaọrụ, dị na-eji eriri ma ọ bụ njikọ Wi-Fi na netwọk. M ga-ahọrọ Wi-Fi n'ihi na ọ bụ ihe dị mfe ka mmekọrịta Winamp media n'ọbá akwụkwọ n'etiti na kọmputa na ekwentị-ejighi eriri. Nzọụkwụ ndị dị mfe: akpa wụnye Winamp maka Android ma mee wireless mmekọrịta NchNhr / Ntọala; mgbe ahụ ejikọ ngwaọrụ gị na kọmputa; na-agba ọsọ Winamp, òké n'elu ngwaọrụ akara ngosi na pịa "mmekọrịta" button.